Zvitifiketi & Kudza
BS Chikamu Chete
DIN Rail Imwe Pasina
BS Chikamu Chitatu
Yepamberi Metering Zvivakwa (AMI)
Kubudirira KweProjekiti & Mari
N + zvese-mune-imwechete Solution
Simba Kugonesa Management Solution
AMI Solution muLaos
Mutengo-Unoshanda Smart Metering mu Middle East
Linyang PV Zvirimwa muChina
Smart Keypad base Tatu Phase Yakabhadharwa Meter LY-SM350
Smart Tatu Chikamu Pasina Kunanga Meter (CTVT Yakavhiyiwa) LY -...
Smart Nhatu Chikamu Pasina Kunanga Meter (CT Inoshanda) LY-SM ...
DIN-Rail Smart Imwe Pasika Yakabhadharwa Meter LY-SM120
Smart Keypad Imwe Pasika Yakabhadharwa Meter LY-SM150
Yakajairwa Imwe Pasika Phase Meter
LY-BM11 metres anodhura-anoshanda akajairwa imwechete chikamu metres, anoshanda kune vekugara vatengi uye epasi-metering mapurojekiti. Iwo akarurama uye anochengetedzwa-zvakanaka nemabasa ekurwisa-kukanganisa, akakodzera kudhura-kudhura kwemari yekuunganidza uye mhinduro dzekuchengetedza.
LY-BM11 metres akagadzirwa zvichibva pane inochinjika chimiro iyo inopa akati wandei sarudzo maererano nemusika uye vatengi zvinodiwa.
Smart Kadhi Yakavakirwa Kubhadharwa Kwemagetsi Meter LY-SM150
LY-SM150 prepaid metres ari epamberi AMI akangwara imwechete chikamu magetsi metres, ine BS yakasanganiswa keypad / Smart Kadhi mhando uye / kana kupatsanura keypad mhando sarudzo. Yadzo yakasarudzika ye plug-uye-yekutamba yekutaurirana module inogadzira mukana wekuchinjana uye kushandiswa kweakasiyana eakavimbika wired & isina waya kutaurirana maficha, akakodzera ekugara uye madiki saizi C&I vatengi.
LY-SM150 prepaid akateedzana metres akaringana pakuyera & kuongorora mutoro uye network maparamendi pamwe neanopokana-nekukanganisa mabasa, achivaita iwo akakosha ekuunganidza mari nekuchengetedza mhinduro. Izvo zvakagadzirwa zvichibva pa20-bit Token zvinoenderana ne STS kana CTS zvirevo, zvinoteedzana zvizere neDLMS / COSEM, IDIS zviyero uye zvakasimbiswa neDLMS, MID, IDIS, STS, zvitupa zveSABS kuti vimbise kubatana kwavo pamusoro peAPI chikuva.
C&I CT / PTCT Matatu-chikamu CT / PTCT Akabatanidzwa Smart Energy Meter ndeye yepamusoro yepamusoro Smart Meter kuyera matatu-chikamu AC inoshanda / inogadzirisa simba ine frequency ye50 / 60Hz. Iyo ine akasiyana siyana akaomesesa mabasa ekuona Smart Kuyera & Management yesimba, ine maficha eakanyanya kurongeka, kwakanyanya kunzwisisika, kuvimbika kwakanaka, yakafara kuyera renji, yakaderera kudyiwa, yakasimba dhizaini uye yakanaka chitarisiko, nezvimwe.
LINYANG SPLIT-TYPE SINGLE-PHASE DIN RILI KUWEDZERA KEYPAD PREPAYMENT ENERGY METER
Linyang Split-mhando Imwe-chikamu DIN njanji inokwirisa Keypad Kubhadhara Energy Meter ndeyeIEC-yakajairwa magetsi mita inoshandiswa kuyera imwechete-chikamu AC inoshanda simba ine frequency ye50 / 60Hz uye yekubhadharira basa kuburikidza nekiyi kiyi uye YAKABVUNZWA. Kana vatengi vachizoda kutenga magetsi, Vending poindi ichavapa iyo 20-bit TOKEN yakavharidzirwa neruzivo rwekuchaja magetsi. Vatengi vanoisa iyo YAKABVUNZWA mumamita kubva pane iyo kiyi, uye ipapo mita inoseta iyo YAKAVAKA uye kuchaja iyo mita. Iko kuchaja TOKEN kunoumbwa nenhamba makumi maviri. Iyo data yekuchinjisa protocol chichemo pamwe neSTS standard.
Smart Matanhatu Phase Meter LY-SM300
LY-SM300 metres epamberi AMI smart matatu chikamu magetsi metres, ine yakasarudzika ficha yepulagi-uye-yekutamba yekukurukurirana module, ichigadzira mukana wekutsinhana uye kushandiswa kweakasiyana eakavimbika wired & wireless kutaurirana, anoshanda kune pekugara uye diki saizi C & I vatengi.
LY-SM300 metres inopa zvishandiso zvine hunyanzvi hwekururamisa uye kuvimbika mukuyera & kuongorora mutoro uye network maparamendi pamwe nemabasa ekurwisa-kuvhiringidza, zvichivaita akakodzera ekuunganidza mari uye mhinduro dzekuchengetedza. Izvo zvakagadzirirwa kuzadzisa zvizere neDLMS / COSEM IEC zviyero uye zvakasimbiswa neDLMS chitupa.
Smart Imwe Pasika Chikamu Meter LY-SM160
LY-SM160 metres ari epamberi AMI akangwara imwechete chikamu magetsi metres, ine yakasanganiswa PLC uye / kana isina waya plug-uye-yekutamba yekukurukurirana module, inoshanda kune yekugara uye diki saizi C&I vatengi.
LY-SM160 metres inopa zvinoshanda zvine hunyanzvi hwekururamisa uye kuvimbika mukuyera & kuongorora mutoro uye netaneti parameter pamwe nemabasa ekurwisa-kuvhiringidza, zvichivaita akakodzera emitengo yakaderera yemitengo yekuunganidza mari nekuchengetedza mhinduro. Izvo zvakagadzirirwa kuzadzisa zvizere neDLMS / COSEM uye IDIS zviyero uye zvakasimbiswa neDLMS uye zvitupa zveMID kuvimbisa kubatana kwavo pamusoro peAPI chikuva.
Smart Nhatu Chikamu Pasina Kunanga Meter (CT Yakashanda) LY-SM300CT
LY-SM300-CT yakakwira AMI isina kunangana matatu matatu magetsi metres ayo anopa zvinoshanda zvine kukwirira kwakanyanya kwekirasi 0.5s / 0.2s uye nekuvimbika kwakanyanya, kunoshanda kune akasiyana maC & I vatengi pamwe nekutsiva metering. Izvo zvinoratidzirwa nemabasa akasimba anosanganisira kuyera & kuongorora mutoro uye network maparamende pamusoro pemazhinji-renji magetsi nematanho azvino, kuwedzerwa kwesimba kwemhando yekutarisisa pamwe nekuyera kweTHD nezvimwe, izvo zvinopa simba zviwanikwa uye maindasitiri akazvimirira zviri nyore uye nemazvo kutarisa masimba emagetsi.
Iyo modular dhizaini yeLY-SM300-CT inopa dzakasiyana siyana dzinovimbika wired & isina waya yekutaurisa interface sarudzo. Ivo vanopupurirwa ne MID, DLMS / COSEM uye IDIS kuvimbisa yakavimbika uye isinganzwisisike metering chikuva cheAMI system.
Smart Nhatu Chikamu Pasina Kunanga Meter (CTVT Inoshanda) LY-SM300-CTVT
LY-SM300- CTVT ndeyemberi AMI isina kunangana matatu chikamu magetsi metres ayo anopa zvishandiso nekukwirira kwakaringana kwekirasi 0.5s / 0.2s uye yakanyanya kuvimbika, inoshanda kune akasiyana maC & I vatengi pamwe nekutsiva metering. Izvo zvinoratidzirwa nemabasa akasimba anosanganisira kuyera & kuongorora mutoro uye network maparamende pamusoro pemazhinji-renji magetsi nematanho azvino, kuwedzerwa kwesimba kwemhando yekutarisisa pamwe nekuyera kweTHD nezvimwe, izvo zvinopa simba zviwanikwa uye maindasitiri akazvimirira zviri nyore uye nemazvo kutarisa masimba emagetsi.
Iyo modular dhizaini yeLY-SM300- CTVT inopa dzakasiyana siyana dzinovimbika wired & isina waya yekutaurisa interface sarudzo Ivo vanopupurirwa ne MID, DLMS / COSEM uye IDIS kuvimbisa yakavimbika uye isinganzwisisike metering chikuva cheAMI system.
LY-SM350 prepaid akateedzana ari epamberi AMI akangwara matatu chikamu akabhadharwa magetsi metres, aine BS yakasanganiswa keypad / Smart Kadhi mhando uye / kana kupatsanura keypad mhando sarudzo, ivo vanogona kumisikidzwa muPayipi kana Postpaid modhi. Yadzo yakasarudzika ye plug-uye-yekutamba yekutaurirana module inogadzira mukana wekuchinjana uye kushandiswa kweakasiyana eakavimbika wired & isina waya kutaurirana maficha, akakodzera ekugara uye madiki saizi C&I vatengi.
LY-SM350 prepaid akateedzana metres akaringana pakuyera & kuongorora mutoro uye network maparamendi pamwe neanopokana-nekukanganisa mabasa, achivaita iwo akakosha ekuunganidza mari uye mhinduro dzekuchengetedza. Izvo zvakagadzirwa zvichibva pa20-bit Token based STS kana CTS zvirevo, zvinoteedzana zvizere neDLMS / COSEM, IDIS zviyero uye zvakasimbiswa neDLMS, MID, IDIS, STS, uye zvitupa zveSABS kuvimbisa kubatana kwavo pamusoro peAPI chikuva.
Smart Matanhatu Phase Meter LY-SM360
LY-SM360 metres ari epamberi AMI smart matatu chikamu magetsi metres, iine integrated PLC uye / kana isina waya plug-uye-yekutamba yekukurukurirana module, inoshanda kune yekugara uye diki saizi C&I vatengi
LY-SM360 metres inopa zvinoshanda zvine hunyanzvi hwekururamisa uye kuvimbika mukuyera & kuongorora mutoro uye netaneti parameter pamwe nemabasa ekurwisa-kuvhiringidza, achivaita akakodzera emitengo yakaderera-shoma yekuunganidza mari uye mhinduro dzekuchengetedza. Izvo zvakagadzirirwa kuzadzisa zvizere neDLMS / COSEM uye IDIS zviyero uye zvakasimbiswa neDLMS, zvitupa zveMID kuvimbisa kubatana kwavo pamusoro peAPI chikuva.
Smart Imwechete Chikamu Chikamu Meter LY-SM 150Postpaid
LY-SM150 postpaid metres ari epamberi AMI smart imwe-chikamu metres, ine yakasarudzika ficha yepulagi-uye-yekutamba yekukurukurirana module, ichigadzira mukana wekutsinhana uye kushandiswa kweakasiyana eakavimbika wired & isina waya kutaurirana maficha, akakodzera pekugara uye diki saizi C&I vatengi.
LY-SM150 postpaid metres dzakaringana pakuyera & kuongorora mutoro uye network maparamendi pamwe nemabasa ekurwisa-kukanganisa, zvichivaita akakodzera ekuunganidzwa kwemari uye mhinduro dzekuchengetedza. Izvo zvakagadzirirwa kuzadzisa zvizere neDLMS / COSEM uye IDIS zviyero uye zvakasimbiswa neDLMS, MID, zvitupa zveIDIS kuvimbisa kubatana kwavo pamusoro peAPI chikuva.
Smart Matanhatu Phase Meter LY-SM 350Postpaid
LY-SM350 postpaid metres ari epamberi AMI matatu phase metres, ine yakasarudzika ficha yepulagi-uye-yekutamba yekukurukurirana module, ichigadzira mukana wekutsinhana uye kushandiswa kweakasiyana eakavimbika wired & wireless kutaurirana mafasita, akakodzera pekugara uye diki saizi C&I vatengi.
LY-SM350 postpaid akateedzana metres akaringana pakuyera & kuongorora mutoro uye network maparamendi pamwe nemabasa ekurwisa-kuvhiringidza, achivaita akakodzera ekuunganidzwa kwemari uye mhinduro dzekuchengetedza. Izvo zvakagadzirirwa kuzadzisa zvizere neDLMS / COSEM uye IDIS zviyero uye zvakasimbiswa neDLMS, MID, zvitupa zveIDIS kuvimbisa kubatana kwavo pamusoro peAPI chikuva.
Fekitori: Kwete 666 Linyang Road, Qidong, Jiangsu Province 226299, China
Kumusoro: 18F, kuvaka 1, Zhengda Wudaokou Plaza, No. 1199 Minsheng Road, Pudong New Area, shanghai 200135, China
Kana iwe uchida kuwana iyo yazvino ruzivo, ndapota zadza fomu pazasi.
tambo (48) "/www/wwwroot/global.linyang.com/wp-content/cache"